Mohamed Salah iyo Leonel Messi oo isku helay xayaysiin ay u sameynayeen Pepsi (yaa laga xirfad badiyay?) – Gool FM
Mohamed Salah iyo Leonel Messi oo isku helay xayaysiin ay u sameynayeen Pepsi (yaa laga xirfad badiyay?)
Haaruun February 12, 2019
(Liverpool) 12 Feb 2019. Labada weeraryahan ee u kala ciyaara Barcelona iyo Liverpool, Lionel Messi iyo Mohamed Salah ayaa waxay xayaysiin ama dacaayad cusub u sameeyeen shirkadda cabitaannada fudud ee Pepsi.
Xiddigahan ayaa isugu soo baxaya kaallin shidaal, kaddibna waxay ku tartamayaan gasicii ugu dambeeya ee Pepsi ee ku haray qaboojiyaha ama tallaajadda, iyagoo ku heshiinaya in xirfaddooda ku tartamaan oo ninkii loollankaas ku guuleystana uu cabitaankaas ku haray tallaajadda uu isagu qaato.
Laakiin intii ay xirfadahooda cajiibka ah soo bandhigayeen ayaa qof saddexaad ka hor cabayaa xabaddii cabitaanka ahayd ee hartay.
Salah ayaa tan iyo 2016­-kii waxa uu xayaysiin u sameynayay Pepsi oo caan ku ah dhanka xayaysiinta iyadoo horey ay cabitaankan u soo xayaysiiyeen Roberto Carlos, David Beckham, Ronaldinho, Juan Sebastian Veron, Francesco Totti, Raul iyo Carli Lyloyd.
Ibrahimovic oo kala doortay kooxda ugu cad cad ee guuleysan karta kulanka Manchester United iyo PSG
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Manchester United Vs Paris Saint-Germain